မိတ္ထီလာအရေးပေါ်မကြေညာမီနှင့်ကြညာပြီး အခြေအနေ(VOA) အင်တာဗျူး …. | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မိတ္ထီလာအရေးပေါ်မကြေညာမီနှင့်ကြညာပြီး အခြေအနေ(VOA) အင်တာဗျူး ….
အရေးပေါ် အခြေအနေ မကြေညာခင်အထိ မိတ္ထီလာမြို့တွင်းက အခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူနေတဲ့ ဗွီအိုအေ ဝိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်းက မိတ္ထီလာမြို့ကနေ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားပေမဲ့လည်း အားလုံးက လူစုလူဝေးတွေနဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သွားလာနေကြသလိုပဲ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့လည်း သွားလာနေကြတာကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့နေရပါတယ်။ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လည်း ညဘက်တွေမှာလည်း ညနက်တဲ့အထိ သွားလာနေကြသူတွေ ရှိသလိုပဲ ဒီလို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ NLD ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က အခုလို ပြောပါတယ်။“အခုထိတော့ အဖမ်းအဆီး မရှိသေးဘူး၊ ဆူပူသောင်းကြမ်းနေတဲ့သူတွေကို ဖမ်းတာဆီးတာ ဘယ်သူမှ မလုပ်ဘူး၊ မလုပ်တဲ့အခါကျတော့ အခုကြည့်- မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးတဲ့သူတွေ ဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့လား၊ သူများကို ချဖို့လား-မသိဘူး။ တုတ်တွေ၊ ဓားတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပါတယ်။”
အစိုးရရဲ့သတင်းတွေက အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းထားလို့ရတယ်၊ သေဆုံးသူ ၅ ဦးလောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောပေမဲ့လည်း တကယ်တန်းမှာ ဒိထက်မက ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် က သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အလောင်းတွေ မီးရှို့တာတွေကို မတွေ့ရပေမဲ့လည်း ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရတဲ့ ဦးဝင်းထိန်ကတော့ အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာ လမ်းပေါ်မှာ ၃ လောင်းလောက် တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာရတာတော့ မခန့်မှန်းတတ်ဘူး။ ဒဏ်ရာရတာက အများကြီး မရှိဘူးထင်တယ်၊ အခုဟာက အပြတ်ရှင်းကြတာ။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီးတော့မှ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ မိတဲ့သူကို သတ်ပစ်လိုက်တာ၊ သတ်ပြီး မီးရှို့ပစ်လိုက်တာ။ နောက်ပြီးတော့ လမ်းပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေပုံပြီး မီးရှို့နေ တယ်၊ နောက်ပြီး မွတ်ဆလင်အိမ်တွေကို ဖောက်ပြီးတော့မှ လုတာတွေ ရှိနေတယ်။”
ရဲက လူအုပ်ကို လူစုခွဲ ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု သူကြုံခဲ့ရတာကိုလည်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
“မနေ့က ဖြစ်တာကတော့ မင်္ဂလာဇေရုံရပ်မှာ မွတ်ဆလင် ၁၀၀ လောက်ကို လူအုပ်က ဝိုင်းပြီးတော့ တောင်းဆိုတယ်၊ ရိုက်တယ်၊ အဲဒီကြားထဲကမှ ဝင်လုတဲ့သူတွေကို ပစ်တာ၊ ပစ်တော့ ၂ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ပေါင်မှန်တာပေါ့။ ခါးအောက်ပစ်တာပေါ့။ အဲဒါပဲ သိတယ်၊ ကျန်တာတွေတော့ မသိဘူး။”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မန္တလေးတိုင်း၊ ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဆီကို သူကနေတဆင့် အမှာစကားပြောကြားတာကိုလည်း ဦးဝင်းထိန် က ပြောပြပါတယ်။
“ MRTV-4 သတင်းမှာတော့ လူ ၅ ယောက်ပဲ သေပြီးတော့ ၃၉ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ကတည်းက ၂၀ လောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီနေ့ပါနဲ့ ပေါင်းရင် ၂၅ ယောက်လောက် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂ ကြိမ် သတင်းပို့တယ်လေ။ ပို့တဲ့အချိန်မှာ- မနက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာပြောလဲဆိုရင်- ဝန်ကြီးချုပ် ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အသုံးပြုပြီးမှ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပါ-လို့ ပြောလိုက်တော့ ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ လုပ်ပါမယ်-ဒါလည်း ကျနော်တို့နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကျနော်တို့လုပ်မယ့် မူနဲ့ အတူတူပါပဲ-လို့ ပြောတယ်။ ပြောသာပြောနေတာ- နေ့ခင်းတခုလုံး မြို့ထဲမှာ အကဲခတ်တဲ့အခါ ကျတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လမ်းသလားပြီးတော့ အော်ဟစ်ပြီးတော့ နေတာတွေက နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတယ်။ နေရာတကာမှာ ရှိနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညနေမှာ သူ့ကို တခါ သွားတွေ့ပြီးတော့- ခင်ဗျားတို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ကင်းလှည့်ပြီးတော့ အော်ရမယ်၊ ထိန်းချုပ်ရမယ်-ဆိုတော့ – လုပ်နေတယ်-လို့ ပြောတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တော့ မတွေ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ညနေဆိုလို့ရှိရင် မွတ်ဆလင်အိမ်တွေပေါ့- မွတ်ဆလင်အိမ်တွေက လူမရှိတော့ဘူး။ အဲဒီအိမ်တွေက ဖောက်တာတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့ လုံခြုံရေး ချပေးပါ-လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သူက ချပေးပါမယ်လို့တော့ ဝန်ခံတာပဲ။ အဲလို ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲက အခုနတုန်းက ပြောတာတွေ အကုန်ဖြစ်တယ်၊ မီးရှို့တာတွေ၊ အဖောက်ခံရတာတွေ၊ လက်လွတ်စပယ် အသတ်ခံရတာတွေက အဲဒီလို ရှိတယ်။ အစိုးရ version ကတော့ Everything is enough control. ပေါ့- အားလုံး ထိန်းချုပ်လို့ရပြီလို့ ယူဆထားတာ။ အန်ကယ်လ် တို့က မထင်ဘူး။”
ငွေကြေးတတ်နိုင်ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက ကားတွေနဲ့ တခြား တမြို့တရွာတွေကို ထွက်ခွာ သွားနေကြပါပြီ။ ဆင်းရဲသား မွတ်ဆလင်တွေကတော့ သူတို့နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွေမှာပဲ နေထိုင် ရတာ မလုံခြုံတဲ့အတွက် သူတို့တွေကို လူ အုပ်လိုက်၊ အုပ်လိုက် ပြောင်းရွှေ့ နေရာ ချပေးထားတာ ကိုလည်း ကျနော် ကိုယ်တိုင် တွေ့ရပါတယ်။ မနေ့တုန်းက ဆိုလို့ရှိရင် ခရိုင်အား ကစားကွင်းထဲကို အမှတ် (၁) လမ်းမတော် လမ်းမကြီးအတိုင်း ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မွတ်ဆလင် မိသားစုတွေကို ရဲ အစောင့်အရှောက် အခြံအရံတွေနဲ့ ခေါ်ဆောင် သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေကလည်း ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ဘုရားဝင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒုက္ခသည်ဖြစ်ရတာကတော့ မွတ်ဆလင်ရပ်ကွက်အနီးမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သူတို့အိမ်တွေပါ မီးလောင်လို့ရှိရင် မီးကူးစက်ခံရမှာ စိုးတာကြောင့် အထုတ်တွေပိုက်ပြီးတော့မှ ဘုရားဝင်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်ကြတာကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ် ပြန်ပြီး မီးရှို့နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူ့ရဲ့အိမ်ပါ မီးလောင်သွားရတယ်လို့ ပြောပြတဲ့သူတစ်ဦးကိုလည်း ကျနော် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
“မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင် ကိုးနဝင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်တိုက်ထဲကို ကျနော်တို့ရပ်ကွက်ကို မီးရှို့ပြီးတော့မှ သူက ဝင်လာလိုက်တာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ ဝင်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ သူ မီးရှို့တာကို စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ မာမူကိုဝင်းကိုက ပိုက်ဆံပေးလို့ သူ ဝင်ရှို့ရပါတယ်ဆိုပြီး သူက ဖြောင့်ချက်ပေးတယ်။ ဖြောင့်ချက်လည်းပေးတယ်။ သူ့ကို ရပ်ကွက်ထဲက ရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေကရော၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကရော ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ အခါကျ လမ်းမပေါ် ဆွဲထုတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူ့ကို မီးရှို့လိုက်တယ်။”
လုယက်မှုတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ ဒီလုယက်မှုတွေကို မြို့ခံတွေက ကျူးလွန်ကြတာ မဟုတ်ဘဲ နဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ အနီးတဝိုက်က လူတွေ ရောက်လာကြပြီး မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ဆိုင်တွေ ကို ဖောက်ပြီး ယူနေကြတာပါ။ မြို့လည်ခေါင်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို ဖောက်ထွင်းနေကြတဲ့ သူတွေဟာ တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားကြပြီးတော့ သူတို့တွေကို ရပ်ကွက် သူ ရပ်ကွက်သားတွေ ကလည်း မတားဆီးနိုင်ကြဘဲနဲ့ ဆိုင်ကို မီးမရှို့ဖို့နဲ့ မီးရှို့လို့ရှိရင် အိမ်နီးချင်းတွေကိုပါ မီးကူးစက်မှာ စိုးရိမ်တယ်လို့ တောင်းပန်နေကြပြီးတော့ ကြိုက်တာကိုသာ ယူသွားကြ- လို့ ပြောဆိုနေတာတွေ ကိုလည်း ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ရပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့ခံတွေကတော့ ဒီလို ဖောက်ထွင်း ပစ္စည်း ယူနေကြတာကို မနှစ်မြို့ကြပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း လိုက်လံပိတ် ဆို့ ဖမ်းဆီးတာတွေကို လုပ်နေပေမဲ့လည်း အခု ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့စာလို့ရှိရင် ရဲအင်အားက မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်မှာ နည်းပါး လွန်းတာကို ကျနော် သတိထားမိပါတယ်။
အခု မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်ကိုယ်တိုင် မိတ္ထီလာခရိုင် ထွေ/အုပ်ရုံးမှာ လာရောက်ထိုင်ပြီးတော့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းနေပါတယ်။ ဒေသခံ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ အခြေအနေတွေကို တမင်သက်သက် လွှတ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ အခြေအနေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတာ ကို တွေ့နေရတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လမ်းပေါ်မှာ အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေကို မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ ဒေသခံ NLD ပါတီဝင် ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ကို ပြောပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေကိုတော့ ဗွီအိုအေ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာ ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က အခုလို ပြောပါတယ်။“ဟုတ်ကဲ့။ လမ်းတွေအားလုံးကို စစ်တပ်က တာဝန်ယူလိုက်ပါပြီ။ စစ်ဥပဒေကြေညာပြီးတော့ ပြဌာန်းလိုက်ပြီ။ စစ်တပ်က အကုန်တာဝန်ယူလိုက်ပြီ။ ညနေ ၆ နာရီကနေ မနက် ၆ နာရီထင်ပါတယ်။ မာရှယ်လော-က။ အဲဒီကာလမှာ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ် နေကြပေတော့-ပဲ။”မေး။ ။ အခု ဘယ်နှစ်နာရီ ရှိပြီလဲ ဆရာ။“အခု ကျနော်တို့ဆီမှာ ၈ နာရီ ရှိပါပြီ။”
မေး။ ။ –ဆိုတော့ လမ်းပေါ်မှာ လူမရှိတော့ဘူးပေါ့။
“မရှိတော့ဘူး။ အသွားအလာတွေ အကုန်လုံး ရပ်ဆိုင်းသွားတယ်။”
မေး။ ။…ဆိုတော့ ဆူဆူ ပူပူ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရပ်စဲသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်တာပေါ့။
“ဆူဆူပူပူဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ ဒီနေ့ဆိုရင် တော်တော်လေး ရှင်းသလောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ၃ ရက်လောက် နေပြီးမှာ မာရှယ်လောက ထွက်တယ်။ မာရှယ်လော စောစောစီးစီးက ထုတ်ထားလည်း ပြီးတာပဲ။ အခုတော့ နောက်ကျတယ်။”
မေး။ ။ မီးလောင်တာတွေရော ငြိမ်သက်သွားပြီလား ခင်ဗျ။
“မီးလောင်တာတွေတော့ ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတစ်ခုက မွတ်ဆလင်တွေပိုင်တဲ့ စတိုးဆိုင်တွေကို ဖျက်ဆီးပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေ ယူတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့။ ဒီနေ့ ဆိုလို့ရှိရင် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့- ရေခဲသေတ္တာတို့-အဲလိုပစ္စည်းတွေကို သယ်ထုတ်နေတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သယ်ကြ၊ ကားတွေနဲ့သယ်ကြ၊ သုံးဘီးငှားပြီး လာသယ်တဲ့သူတောင် ရှိသေးတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။”
မေး။ ။ အရေးပေါ် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အဲဒီလို ဆိုင်တွေကို ဖောက်ထွင်းယူတာတွေလည်းပဲ ငြိမ်သက်သွားပြီပေါ့။-
“အတော် ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ အခုတော့ အတော်များများ ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ ကျနော်တို့ အမှတ် (၁) စခန်းမှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ကျနော်တို့ သွားကြည့်ပါတယ်။ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ ကျနော် နဲ့ပေါ့။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုရင်လည်း ကလေးတွေက အစာမစားရ-မပြုရဆိုတော့ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုတွေရော- ဘာတွေရော-ကျနော်တို့ ရှိနေတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့ သွားပြီး အကူအညီပေးလို့ မရသေးဘူးပေါ့။ မာရှယ်လောက ၄ နာရီမှာ စပြီးတော့ ထုတ်တာ။ ကျနော်တို့ ခရိုင်ရုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာမှ ဝန်ကြီးချုပ်က ဖတ်ပြတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်တို့ မာရှယ်လော ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီတော့ တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်တွေကိုတော့ သိမ်းချင်သိမ်းပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေကိုထိန်းတဲ့ ကိစ္စကတော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ လူတိုင်းက တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက် ကိုင်ကြမှာပဲ။ ကိုင်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုင်တာပါ။ အဲဒါလေးကိုတော့ ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အဲဒါကိုတော့ ကျနော် တောင်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။”
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်တခုက နောက်ဆုံး ဆရာတို့ သိရတဲ့အထိ် အသတ်ခံရတဲ့သူ၊ သေတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းသိရပါသလဲ ခင်ဗျ။
“အကြမ်းဖျင်းတော့ ကျနော်ထင်ပါတယ်- ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကတော့ နည်းတယ်ပေါ့လေ။ သူတို့က ၅ ယောက်ပဲ ကြေညာထားတာ။ ဒဏ်ရာရတာ ၃၄ ယောက်ပေါ့။ တကယ်တန်းဆိုရင် အဲလောက် မကပါဘူး။ ကျနော်တို့မြင်တာကို ၇ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ ဒါတောင် ကျနော်တို့ မျက်မြင်ပဲ ရှိသေးတယ် နော်။ ဟိုနားဖြစ်လိုက်၊ ဒီနားဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့ ပြဿနာ၊ မီးရှို့ထားတဲ့ အလောင်းတွေနဲ့ဆိုရင် လမ်းပေါ်မှာ အခုထိ မသိမ်းသေးဘူး။”
ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကို ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
This entry was posted on March 23, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိထ္ထီလာအရေးအခင်းအပေါ်(၈၈)ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် အင်တာဗျူး ….	မိတ္ထီလာမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိ →